Umhla My Pet » Ngubani Umvuzo On Usuku First?
Ngubani Umvuzo On Usuku First?
ukubuyekezwa: Nov. 15 2019 | 3 min ukufunda
Musani ukundibiza “iswekile”
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, Ndaphuma umfazi izihlandlo ezithathu isibini iiveki. Ebeza kuhlawulwa zonke, kuquka abalishumi bagels ngenye intsasa yangeCawa xa waqonda ndimbuza ulibele sipaji. Yena ngesisa wathembisa ukuba athabathe komhla olandelayo.
Wamthiya kum umsebenzi wosuku olulandelayo ukundixelela ukuba weva umdlalo elizongomayo ngathi. Wathi yena bexakekile yaye ndacela ufumanise ukuba bekukho amatikiti ezikhoyo. Akukho ngxaki. Ndabiza yokubonela kwaye ndafunda khona kuphela ekhohlo ezintandathu. Yintoni umfana ukuyenza? Akukho Dili enkulu, Ndathenga isibini amatikiti kwaye ndicinge ndimbuza kulanda isidlo ngaphambi kokuba waphuma.
emva kokuba wethu $40 isidlo, yena wabeka phantsi ikhadi letyala lakhe waza waya lokuhlambela. Uthe wabuya, waqaphela ukuba andizange kwikhadi lam letyala ikhwelise okanye ukwahlula itshekhi. Phezu kwayo glared kum, wathi, kunye Makhesenze yityhefu hayi ukushenxisa isigqebelo: 'Yintoni endiza, sugar mama wakho?!’
yeah, ukuba mfo akusoloko nto yanelisayo ehlabathini. Kodwa yintoni na ndizokuyenza? Ndiye ndayeka bezibuza ukuba yintoni “lungile” kwaye baye bagqiba ukuba amkele inkqubo Ndiye ilifa. Kule nkqubo, ukugonwa uhlawula ngokungathandabuzekiyo, Nokuba umfazi unika ukuhlawula, umele ukuba bathi hayi. Ubuncinane ngemihla embalwa yokuqala. Okanye imihla yokuba uyatyholwa Ndandithandana. Okanye mhlawumbi kusoloko. Oku kuxhomekeke umfazi. Asinakuze sazi ngaphandle asilumkanga zethu zisivumele ukuba makawuthathele itshekhi. Yaye ngoko, oko kudla kube semva kwexesha ukuzithethelela ukuziphatha kwakho webutho.
Le quandary kulungile kwaye akukho mpendulo kunene. Njengoko elime Ngubani ngemihla baninzi kakhulu, Ndakhe ndeva onke amabali omabini amacala onke angle. Kodwa ekubeni sengqiqweni akuthethi usenokubonakala umdlalo kakhulu kulo mmandla, Mna, ngob kulinika ixesha ubuso.
OKO KUTHETHWA NGABANTU:
WAKHE: Yena ufuna ukuhlawula kum.
Ewe, kwaye, ngokubanzi, ukuba kunjalo. ukuba nesisa, ngokukodwa ukuba umntu omkhathaleleyo, yinto uzive eningenakukholwa – kanye apho, Ndiya wathi, kunye akuba yonke kuhlawulwa ngomnye umntu.
KUYE: Ayilindeleyo ukuba ahlawule yonke.
Ewe, kwaye yiloo umzekelo elasekwa ndlela phambi kokuba uzelwe. Musa akoyise, yenze ngoncumo, Kuba, ukuba nithe na, nina bangafumani omnye umhla.
WAKHE: Lihlawule, ingakumbi ekuqaleni.
Le logic dicier kancinane. Yini na ukuba umntu ahlawule? Ngoba chivalrous? Khawuve ukuba chivalry waqala ngexesha madoda namabhinqa akazange. Women, ngokoqobo, Ayikwazanga ukuhlawula. ngoko ke, amadoda ukuchola itshekhi iphume nangokunyanzelwa, ongaphumiyo ububele. Kuye esele sabhalwa ikhowudi linene ngayo, nto leyo ithathwa njengento embi kakhulu ukuthandabuza. Mna andikanyuki, bebuzana, kodwa ubone ukuba nomsindo wena ukuba nkqu endinisa phezulu?
KUYE: Kodwa wandicela ngaphandle.
Ke ngoku? Ukuba yokuziphatha uthi uhlawulela komhla wokuqala, kwaye ulindele ukuba ukuhlawula kumhla wokuqala, kwaye unako ukuhlawula kumhla wokuqala, ngoko ukuhlawulela umhla damn kuqala.
WAKHE: Akukhathaliseki oko kwenza. Inene usoloko uhlawula.
Ukuba mfo yenza Makhesenze imali, Ndiyakuqinisekisa, ukuba uvuyo lwakhe ingundoqo nobumnandi intlwayelelo yonke eselwayo yokuzivavanya lokugqibela unyango ngala inkosazana wena ngokuqinisekileyo kukho. Kodwa ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kokuba Kutshiphu kwaye amahlwempu. Cheap uthetha mfo ucela umhla wakhe ukuhlawulela iintlanzi xa wayalela inkuku kancinane eninzi. Ombi kuthetha ukuba mfo kunzima ukwenza irente ukuba abhatalele kwemihla ezintlanu ngenyanga. Zibeke kwindawo yakhe: kunzima ukuba ityala kuye zokufuna ukuba iinkangelo alternate.
isisombululo yam, ngokungamangalisiyo phofu, kukho equivocation. Makhe zonke zama ukuqonda omnye komnye. Guys, babe nesisa kangangoko, kuphela kuba ulindele ukuba, kodwa ngoba kunomvuzo ngokunyanisekileyo “kuba umfana” kwaye ukwenza ubomi lula bakhe. Women, unovelwano umfundi grad okanye ntsapho ukuba ayinayo indlela abe chivalrous njengoko Ndingathanda ukuba. Ubungayi kuba ukuze mamas zethu iswekile, kodwa nceda musa njengenyaniso kuthathe oko njengokubonisa ukuba sibe yakho ATM ngayo, Kulungile?